Tet (Taombaovao) any Viet Nam · Global Voices teny Malagasy
Tet (Taombaovao) any Viet Nam
MpanoratraTu Van Cong
Voadika ny 05 Desambra 2018 2:32 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Janoary 2006)
”Mandrangitra ireo Liona” avy amin'i iamblueone (nalaina nandritra ny fankalazana ny Tet tany San Diego)
Fety nentim-paharazana lehibe indrindra ny Tet – Taombaovao manaraka ny fihodin'ny volana any Viet Nam – hajain'ny Vietnamiana rehetra, na dia ireo any ivelany aza. Mbola miezaka ny mividy entana nentim-paharazana toy ny voninkazo, zavamamy ary kobambary miendrika efamira ho an'ity fety manokana ity ny fianakaviana rehetra ao Viet Nam, na manam-bola na tsia.
Mamoaka ny fomba fijeriny manoloana ny Taonan'ny Aliaka ny blaogera vitsivitsy manerana ny firenena. Milaza i Royby, blaogera avy any amin'ny tanànan'i Ho Chi Minh fa tokony hitondra vintana tsara sy fanambinana ho an'ny taona manaraka ny Tet raha toa ka… feno sakafo, zava-pisotro ny tranonao
Ao amin'ny blaogiko, manoratra aho fa tsy ny fetin'ny Taombaovao tandrefana no zava-dehibe ho an'ireo Vietnamiana; ny Taombaovao manaraka ny fihodin'ny volana irery ihany no ankalazain'ny Vietnamiana tsirairay. Ambony ambany ny fanomanana ny Tet, miaraka amin'ny fiantsenana izay laharam-pahamehana voalohany. Mandeha lavitra hatrany Lang Son mihitsy ny Hanoiàna sasany, ao amin'ilay sisintany iraisan'i Viet Nam-Shina mba hividianana entana mora ary, mazava ho azy, vita Sinoa. Mijery ireo rindrina voaloko sy ireo trano voadio ho fanomanana ny Tet i Virtual-Doug, Amerikana blaogera iray monina ao Hue. Misy hatrany ny fifaninanana mba hahavitan'ireo mpanamboatra trano ireo asa fanamboarana rehetra mialohan'ny faran'ny taona mba hanomezana antoka ny fanànana vintana tsara ho an'ireo hipetraka ao.
Ho an'ny Vietnamiana toa ahy, mipetraka lavitry ny tany niaviana, mahafaly ahy ny mahita ny rehetra manomana ny tranony, mividy entana ho an'ny zanany sy ny tenany mialoha. Nofoanan'ny governemanta Vietnamiana ny fampiasana ny tsipoapoaka, izay mitombina satria tsy misy intsony ireo ratra sy fahafatesana mifandray amin'izany. Kanefa, mikarakara afomanga ofisialy izay atrehin'ny fianakaviana an'arivony maro maniry ny hahita ny Taombaovao arahana poaka ireo manampahefana any amin'ireo tanàna lehibe!
‘Tet’ avy amin'ny Vietnamese God
Japana 6 andro izay